mairie-antananarivo – Olana momba ny tsy fivoahan’ny tetibolan’ny CUA
Olana momba ny tsy fivoahan’ny tetibolan’ny CUA
administrateur 9 febroary 2018 Commentaires fermés
Nanao fanambarana androany ny Sendikan’ny Mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (SMKAR), tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny, Mamy Rafanomezantsoa. Mikasika ny tetibolan’ny Kaominina mbola tsy mivoaka atao fanamarinana ny maha-ara-dalàna azy na tsia, na ny antsoina hoe contrôle de légalité, any amin’ny Préfet de Police hatramin’izao, no ipetrahan’ny ahiahian’izy ireo izao.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny sendikà hoy izy, efa tamin’ny volana desambra 2017 no vonona ny tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Reniovohitra, nilaza anefa ny Préfet de Police tamin’izay fotoana izay fa tokony hahemotra volana janoary 2018 no fandaniana azy, miandry ny fahalanian’ny tetibolam-panjakana aloha.
Lany tamin’ny volana janoary teo izany tetibolan’ny CUA izany ary efa nalefa any amin’ny Prefektioran’ny Polisin’Antananarivo, hatramin’izao anefa mbola tsy mivoaka any amin’ny Préfet izany, na ekena na tsia ny maha-ara-dalàna izany tetibolan’ny CUA izany. Efa ho 1 volana sy tapany arak’izany ny CUA no tsy manana tetibola, noho izay antony izay, tsy afaka mampiditra na mamoaka vola ny mpitantana. Ahiana arak’izany hoy ny SMKAR ny tsy handraisan’ny mpiasan’ny CUA karama amin’ity volana febroary ity noho izay antony izay.
Isaorana kosa anefa hoy izy ireo ny DCP, na ny Direction de la Comptabilité Publique, nanome alalana manokana na dérogation tamin’ny volana janoary teo, ka nahafahan’ny CUA nandoa ny karaman’ny mpiasa. Miantso ny tompon’andraiki-panjakana ny SMKAR tsy hampiditra resaka politika ity resaka tetibola ho ampiasain’ny CUA amin’ity taona 2018 ity, fa lasa sorona ny mpiasa sy ny vahoaka hoy izy ireo. Raha tsy handray karama ny mpiasa dia hiantraika amin’ny vahoaka izany satria ny Kaominina dia manao asam-bahoaka hoy ny SMKAR.